नेपालमा हाइड्रोजन इन्धन खपत होला ? – Maitri News
नेपालमा हाइड्रोजन इन्धन खपत होला ?
maitrinews January 10, 2021
पौडेलका अनुसार निगम अब हाइड्रोजन उत्पादनका लागि नीतिगत कानुनी समस्या के छन्, त्यो सल्टाउने र यो क्षेत्रमा लगानीको वातावरण बनाउन लागिपर्नेछ । निगमको आकलनमा आगामी पाँच वर्षभित्र नेपालमा हाइड्रोजन इन्जिनजडित सवारी साधन भित्रिइसकेका हुनेछन् र त्यसमा हाइड्रोजन इन्धन आपूर्ति गर्न निगम तयार हुनेछ । निगमले यससम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान लगायतको प्रबन्धका लागि काठमाडौँ विश्वविद्यालय ९केयू०सँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ ।
निगम र विश्व विद्यालयबीचको समझदारी पत्रमा निगमका निर्देशक दीपक बराल र विश्वविद्यालय स्कुल अफ इन्जिनियरिङका डिन डा। डम्बरबहादुर नेपालीले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । निर्देशक बरालका अनुसार निगम खनिज ऊर्जाको आयात भण्डार र बजारीकरणमा मात्र सीमित नभएर स्वच्छ ऊर्जाको क्षेत्रमा पनि सक्रिय हुनुपर्छ भन्ने सोचका साथ अगाडि बढेको छ । “जलस्रोतमा धनी नेपालले बढी भएको बिजुली र पानीबाटै महìवपूर्ण ऊर्जा स्रोत हाइड्रोजन प्राप्त गर्ने सम्भावनाको यथार्थ चित्रण पाउन केयूसँग समझदारी गरेका छाँै,” उहाँले भन्नुभयो, “अब नेपालमा हाइड्रोजन उत्पादन, खपतका क्षेत्र प्रविधिको उपलब्धता, लागतजस्ता विषयमा अनुसन्धान तथा अन्य कार्यक्रम बन्छन् । इन्धान कारोबार गर्ने निकायले त यो सोच्नै प¥यो नि १”
डा। विराजसिंह थापाका अनुसार विश्वविद्यालयले आयल निगमका लागि आवश्यक इन्जिनियरिङ परामर्श, प्रविधि हस्तान्तरण र उपयोगिता सिर्जना अध्ययन अनुसन्धानका लागि समझदारी भएको हो ।
तर नेपालमा हाइड्रोजनको उत्पादन, खपत, बजार, निर्यात सम्भावना लगायतका विषयमा सरकारी स्तरमा प्रभावकारी अध्ययन अनुसन्धान भएको छैन । डेढ दशकपहिले पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका प्राध्यापकहरूले यसको सम्भाव्यताको विषयमा सैद्धान्तिक अध्ययन गरेका थिए । हालै एसियाली विकास बैङ्कले पनि नेपालमा हाइड्रोजनको सम्भाव्यताका विषयमा एक अध्ययन गरेका थियो । केयूले हाइड्रो ल्याब स्थापना गरेर अध्ययन थालेको छ ।
Previous Previous post: काँग्रेस सभापति देउवा चुनावको पक्षमा
Next Next post: सुन तोलामा २३ सयले घट्यो